1550 nm Er Erbium Glass Fractional laser / fiber laser maka ihu ihu ọhụrụ rejuvenation wrinkle iwepụ igwe
Usoro ọgwụgwọ nke 1550nm erbium glass fiber laser Akpukpo anụ mmadụ agbasapụla site na 1mm kwa afọ kemgbe ọ dị afọ 25. Nke ahụ bụ, akpụkpọ ahụ ga-adịkarị ka ihe gbasara 3.5cm mgbe ọ dị afọ 60. Nkeji gburugburu gburugburu perforated akụkụ nke anya na ọnụ na-egosi na ụdị ahịhịa. Ihe ntanetị nke 1550nm dot-matrix laser wrinkle bụ iji kpalie ezigbo pores na anụ ahụ rụrụ arụ (1cmX 1cm nwere ike ịnwe ruo ihe ntinye 784) site na pores dị mma iji mepụta anụ ọhụrụ na akpụkpọ ahụ, belata l ...
Ipl Opt Laser Nwepu Ntutu Igwe Na-adịgide Adịgide Mwepu Ngwaọrụ
Usoro Nlekọta Ọgbọ ọhụụ nke ọkụ OPT nwere ike ime na akpụkpọ epidermis iji mepụta fotolysis na ihe na-akpali akpali iji wepụ ụdị agba agba niile, filaments ọbara na iwepụ ntutu; igwe ikuku electromagnetic dị elu nke na-eme site na ugboro ugboro ga-eme ka ịma jijiji ọsọ ọsọ na mmiri mmiri nke mkpụrụ ndụ dermal (ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmiri mmiri, ụmụ irighiri mmiri na ion ebubo) site na epidermis, ma mepụta ike ọkụ ruo ogo 45-60. site na nnukwu ọsọ rotat ...
Erbium Glass Fractional Laser 1550nm Mma Akụrụngwa Na-abụghị Ablative Wrinkles / Acne Scars Iwepụ Ihu Ibu
Usoro ọgwụgwọ nke 1550nm erbium glass fiber laser Ọ bụ sistemụ laser laser na-ebighi ebibi ya na 1550nm. Ogologo nke 1550nm na-emetụta ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ nke ukwuu n'ime derma site na epidermis, ebe mmiri dị na anụ ahụ na-etinye ha n'ahụ ma na-eduga n'ọtụtụ dị elu n'ime anụ ahụ. Ike ikuku ọkụ nke laser na-ahọrọ ngwa ngwa nke sebaceous gl ...
Picosecond laser nke e mere maka multi-agba igbu mwepụ. Ike nke anụ ahụ revitalization na ọ fọrọ nke nta ọ bụla downtime na niile na-agba igbu mwepụ, dị ka ihe otutu scars, anyanwụ-emebi akpụkpọ. Wrinkle na melisma wdg Do na-akwa ụta na egbugbu gị? Ike gwụrụ nke afọ isi ike? Na-achọ ọdịdị ndị ntorobịa karịa? Iji teknụzụ kachasị ọhụrụ, laser Picosecond kacha ọhụrụ, ọ dịbeghịrịrị mfe na ngwa ngwa iwepụ ntụpọ na egbugbu achọghị. Igkpụrụ na-ewepu egbugbu na teknụzụ nwere n'ezie ...
1,100% Germany webatara Laser Stacks 2, Ezigbo sapphire Crystal, mmịpụta kachasị mma 3. 12 * 20mm nnukwu ntụpọ buru ibu, yana usoro ọgwụgwọ "IN-Motion", usoro ọgwụgwọ kachasị ọsọ 4. 808nm triple wavelength. achevinq nsonaazụ kacha mma maka ụdị ntutu niile na ụdị anụ ahụ niile Diode laser wepụ ntutu teknụzụ dabere na nhọrọ ike nke ọkụ na ọkụ. The laser na-aga site na anụ elu iru mgbọrọgwụ nke ntutu follicle.Light nwere ike etinye obi gị dum na ghọọ okpomọkụ mebiri emebi hai ...
1060nm 4 ejiri Diode Laser Isi Ọdịdị arọ Llim Slimming Machine
1060nm diode laser body slimming igwe bụ ọgwụgwọ laser na-enweghị mbuso agha, nke a ga-eji zube ma belata ma ọ bụ wepu mkpụrụ ndụ abụba ozugbo. Ọ na-arụ ọrụ maka ma ndị nwoke ma ndị nwanyị ma ụdị ahụ dị iche iche. Otu usoro na-ewe nkezi nke 25 nkeji ma nwee ike ịdabere n'ọtụtụ ebe n'otu oge. 1060nm diode laser sistemu nakweere na-abụghị invasive ahụ contouring hyperthermic technology, nke na-eji 1060nm laser na tumadi zaa adipose anụ ahụ na Mbelata nke isi ike abụba na -...